Kenya oo cabsi ka qabta weeraro uga yimaada Soomaaliya
MANDHEERA, Kenya - Gudoomiyaha Mandheere, Fredrick Shisia ayaa sheegay in ciidamada gobolka ay geliyeen Feejignaan dheeri ah, kadib markii hareeraha Ismaamul goboleedka ay ku arkeen sida uu sheegay dagaalyahano hubeysan oo Al-Shabaab ah.
Wuxuu tilmaamay in dagaalyahanadaan ay qorsheysan inay weeraro ay ka fuliyaan gudaha Magaaladda, isagoo hadalkiisa ku daray inay beegsan doonan xarumaha dowladda, iyo goobaha kale oo ay dadku isugu yimaadaan.
Shacabka deegaankiisa ayuu ka codsaday inay laamaha amaanka ay kala shaqeeyaan nabad-gelyadda iyo gobolka guud ahaan xasilooni dhanka amanniga loogu soo dabaali lahaa.
Hadalka kasoo yeeray Gudoomiyaha magaaladda Mandheera ee dalka Kenya ayaa wuxuu kusoo beegmayaa maalmo un kadib markii dowladdaha Kenya iyo Mareykanka ay Liiska Argigixisada Faraca Al-Shabaab ee dalka Kenya, taasoo loo yaqaan Al Hijra.
Sidoo kale, labadda dowladood ayaa madaxa hogaamiyaha Dhaqdhaqaaqa Al Hijra ee Axmed Iimaan dul-dhigay qiimo lacageed dhan 3 milyan oo dollae, oo ay sheegeen inay siin doonan qofkii keena macluumaad lagu khaarijin karo hogaamiyahaan.
Al-Shabaab ayaa weeraro ka fulisa dalka Kenya, oo kamid ah dalalka ay ciidamada ugu yaboohay howlgalka midowga Africa ee AMISOM, kaasi oo mudo 10 sano ah dagaal kula jira Kooxda oo doonaysa inay meesha ka saarto dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM ayaa ka howlgalayay Jubbooyinka iyo Gedo...
Mareykanka oo duqeyn culus ka fuliyay Soomaaliya
Soomaliya 26.10.2018. 23:09
Qaraxyo culus oo ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 13.02.2019. 12:45
Isbitaallada Kenya oo looga digay daaweynta dhaawacyada Al shabaab
Afrika 26.09.2018. 15:32
Qaraxyo ka dhacay Muqdisho [Fahfaahin]
Soomaliya 08.08.2018. 12:38